प्रहरीको कुटाइपछि आईसीयूमा
गल्कोट । प्रहरीको कुटाइबाट घाइते भएका एक व्यक्तिलाई अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ । बागलुङ गल्कोट नगरपालिका–६ का ४० वर्षीय सोमबहादुर बस्नेत प्रहरीको कुटाइबाट घाइते भएपछि अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको
लमजुङ । लमजुङमा आइतबार अपराह्न ४ बजेर १ मिनेटको समयमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । उत्तरी लमजुङको सिम्पानी केन्द्रबिन्दु रहेको ३ दशमलब ४ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन
गुल्मी । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले धुर्कोट गाउँपालिका–३ हाडहाडेका ५१ वर्षीय शेरबहादुर जिसीलाई घरमै अवैधरुपमा आरन सञ्चालन गरी भरुवा बन्दुक बनाएको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले आज यहाँ पत्रकार
कावसोतीमा बसले ठक्कर दिँदा यादवको मृत्यु
कावासोती । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको कावसोतीमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु भएको छ । आइतबार बिहान डण्डाबाट नारायणगढका लागि छुटेको ना४ख ७९२८ नंको बसले ना४९प २२०७ नंको मोटरसाइकललाई ठक्कर
बसले च्यापेर विश्वासको मृत्यु
दमौली । तनहुँमा शुक्रबार बिहान बसले किचेर एक किशोरको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बन्दीपुर गाउँपालिका–४ पिप्लेका १५ वर्षीय विश्वास थापा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।
पाक्यो सुन्तला, आएन खुशी
हिमलाल पराजुली स्याङ्जा ।जता हेर्यो उतै लटरम्मै सुन्तला । जिल्लाका अधिकाँश ठाउँ अहिले यस्तै छ । बस्ती छेउका पाखो पहेँलपुर छन् । मनमोहक त्यस्तो दृश्यले जोकोहीको मन लोभ्याउँछ । हेर्नलाई
चिसोले जम्दै तालतलैया !
काठमाडौं । हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा अत्यधिक चिसोका कारण तालतलैया समेत जम्न थालेका छन् । आइतबार रातिदेखि सुरु भएको हिमपातका कारण मुस्ताङमा दिउँसोको तापक्रम पनि माइनस १ डिग्रीमा झरेको छ ।
‘अन्तरजातीय विवाह गरेकाले बाहिर आउन चाहेनौं’
हिमलाल पराजुली स्याङ्जा । चर्चित गायिका विष्णु माझी आफ्ना श्रीमान् सुन्दरमणि अधिकारीसहित आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जामा उपस्थित हुनुभयाे। गायिका माझीलाई अधिकारीले बन्धक बनाएको भन्ने खबर विभिन्न मिडियामा आएपछि कार्यालयले
सुन्दरवजार नगरपालिका अनिश्चितकालिन बन्द
सन्देश पौडेल लम्जुङ । लम्जुङको सुन्दरबजार नगरपालिकाको कामकाज अनिश्चितकालका लागि पुनः बन्द भएको छ । कार्यलयभित्रै कर्मचारी कुटिएको विषयलाई लिएर आईतबार बाट कर्मचारीहरुले वडा कार्यालय सहित नगरपालिकाका सवै सेवाहरु अनिश्चितकालीन
दीपक मनाङेलाई गण्डकी प्रदेशसभामा प्रवेश रोक !
काठमाडौं । मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई प्रदेशसभाभित्र छिर्न रोक लगाइएको छ । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले गुरुङलाई शपथ गराउन नमिल्ने बताउनु भएको छ । सोमबारदेखि शुरु हुने हिउँदे